Onye a na-eme emume nchedo ikike mmadụ nwere nwụrụ n'ụlọ mkpọrọ Kyrgyzstan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Onye a na-eme emume nchedo ikike mmadụ nwere nwụrụ n'ụlọ mkpọrọ Kyrgyzstan
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ Kyrgyzstan • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Otu onye na-alụ ọgụ maka ikike dịrị onye Azimjam Askarov anwụọla ebe eji ya na Kegịstan
Onye ọrụ ihe ruuru mmadụ Azimjam Askarov anwụọla mgbe eji ya eji na Kyrgyzstan, n'agbanyeghị ọtụtụ mkpebi mba ụwa na-akpọ ka ahapụ ya ozugbo na enweghị atụ. Askarov etinyegoro afọ 10 n'ụlọ mkpọrọ mgbe ejidere ya n'ụzọ na-ezighi ezi, maka ebubo ụgha, maka ebubo ebubo na igbu ọchụ nke onye uweojii mgbe Askarov na-ede akwụkwọ ọgbaghara nke 2010 n'oge esemokwu agbụrụ Kyrgyzstan. Askarov dị afọ 69.
Askarov nwụrụ n’echi ya mgbe a kpọgara ya n’ụlọ ọgwụ na-agwọ ndị mkpọrọ n’ụlọ mkpọrọ na isi obodo Kegị, Bishkek. Izu ole na ole tupu ọnwụ ya enwere arịrịọ ugboro ugboro maka ịnyefe na ịhapụ ya n'ihi ahụ ike ya na-arịwanye elu na egwu na-arịwanye elu site na akwụkwọ akụkọ ahụ. nje Corona.
“Maazị A ga-ezere ọnwụ Askarov, ”ka o kwuru HRF Onye ọka iwu na mba ụwa Michelle Gulino. “Akpachapụghị anya ndị ọchịchị Kyrgyzstan gosipụtara na ha enweghị inye ya nlekọta ahụike kwesịrị ekwesị na ịhapụ ya na mkpọrọ aka - n'agbanyeghị ụbọchị ikpeazụ ya - bụ ihe nnọchianya nke ụdị arụrụala ahaziri nke ọchịchị Kyrgyzstan gosipụtara megide ndị na-ekpughe ikpe na-ezighị ezi ha. ”
N’izu gara aga tupu ọnwụ ya, Askarov dara ọrịa na-egosi ọrịa coronavirus. Ndị ọchịchị mechara kọọ ihe kpatara ọnwụ ya dị ka oyi baa. Askarov na-arịa ọtụtụ ọrịa na-adịghị ala ala ma nọrọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ibute nje ahụ, n'ihi nsogbu ndị a na nsogbu ndị ọzọ.
Na July 8, 2020, the Tù Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ (HRF) nyefere akwụkwọ mkpesa maka usoro pụrụ iche nke Nationslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na United Nations nke High Commissioner, na-arịọ ka ọ bido nyocha ngwa ngwa banyere njide ejidere Askarov, ebubo ụgha, na njide ejidere.
Askarov rụrụ ọrụ dị ka onye ntụzi ọrụ nke Vozdukh (“Ikuku”), nzukọ Kyrgyzstan nke ruuru mmadụ nke lebara anya na ọgwụgwọ nke ndị ejidere na imeziwanye ọnọdụ ndị eji eji. A maara ya nke ọma karịsịa maka nyocha ọ na-eme n'okwu gbasara oke mmebi iwu ndị ruuru mmadụ site n'aka ndị otu Ngalaba Mpaghara Bazar-Korgon nke ime ime obodo.
Roza Otunbayeva, onye isi oche oge ụfọdụ nke Kyrgyzstan n'oge a na-ekpe Askarov ikpe na 2010, jụrụ inye mgbaghara na ikpe ya. N’afọ 2016, Kọmitii Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na UN ghọtara na Askarov bụ onye a tara ahụhụ, mesoo mmeso ọjọọ, na ikpe na-ezighị ezi nke Ọchịchị Kyrgyzstan ma kpọọ oku ka a hapụ ya ozugbo. Na Mee 2020, Courtlọikpe Kasị Elu nke Kyrgyzstan kagburu arịrịọ Askarov maka inyocha mkpọrọ nke ndụ ya.